dayniile » Taliyaha cusub ee Ciidanka X.D.S oo la kulmay Taliyaha AMISOM
Taliyaha cusub ee Ciidanka X.D.S oo la kulmay Taliyaha AMISOM
Taliyaha cusub ee Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya S/Gaas C/weli Jaamac Gorod ayaa la kulmay Taliyaha Ciidamada AMISOM Jen, Cusmaan Nuur Subagle iyo saraakiisha ugu sareysa Ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM, Labada dhinac ayaa waxa ay isla soo soo qaadeen sida ay lagama maarmaan u tahay in la sii xoojiyo howlgallada ka dhan ah ururka Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidanka Xoogga ayaa sheegay in sanadkan uu u noqon doono Ciidanka Xoogga dalka sanadkii dib-u-dhiska iyo howlgallada lagu lagula dagaalamayo Al-Shabaab, laguna xoreyn lahaa meelaha kooban ee dalka ay uga sugan yihiin.
“Kulankan muhiimka ah ee aynu halkan u fadhino ujeedkiisu waa in wadajir loogu diyaar garoobo dib u xoreynta goobaha dhiman ee Shabaabku joogo. Waxaan isla garanay AMISOM in Soomaaliya laga ciribtiro Al-shabaab.” Ayuu yiri Taliyaha Xoogga Jen. Gorod.
Taliyaha AMISOM Jen. Sugable ayaa ugu hambalyeeyey Taliyaha cusub ee Xoogga dalka xilka culus ee loo magacaabay, wuxuuna cadeeyey in AMISOM ay diyaar u tahay sii xoojinta wada shaqeynta ka dhaxeysa labada dhinac.